Vokatry ny tsaho amin’ny halatra taolam-paty… : ilay nanavotra zandary indray no matin’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Vokatry ny tsaho amin’ny halatra taolam-paty… : ilay nanavotra zandary indray no matin’ny fitsaram-bahoaka
Resaka tsaho sy tsy fifankahazoan-kevitra, niafara tamin’ny famonoana olona… Tompona fiara iray, nanavotra zandary taraiky an-dalana, no maty niharan’ny fitsaram-bahoaka, noho ny tsaho sy resaka tsy nifankahazo.
Efa mahina loatra ny vahoaka… Nisy zandary roa avy nanantanteraka iraka tany amin’ny faritra andrefan’ny kaominina Lopary, ka nisakana fiara izay nandalo. Nanavotra azy ireo ka nanaiky hitondra ireo zandary hiverina hamonjy ny toby any Vangaindrano ny lehilahy iray izay mpamboly sy mpandraharaha, antsoina hoe Fleury. Fiara roa no nifanarakaraka tamin’io izay samy an’i Fleury saingy ny “mecanicien” no mamily ilay faharoa.
“Teny an-dalana anefa, teo akaikin’ny tananan’i Betsiraha, nahita gony iray misy taolam-paty teo amoron-dalana izy ireo ka nijanona. Nanao ny tatitra tamin’ny alalan’ny finday tamin’ny kaomanda Vangaindrano ireo zandary ireo ka araka ny toromarika azony, nampiakarina tao anaty fiara io taolam-paty io ary mijanona manontany ny mponina ao amin’io fokontany voalaza io izy ireo raha toa ka sendra misy vaky fasana ny olona ao”, hoy ny fanazavan’ny zandary.
Nijanona teo amoron-dalana ireo fiara, nampidinina ilay gony misy taolana ary namonjy ny tanàna nanatona ny mponina sy ny raiamandreny ireo zandary roa lahy nanazava ny raharaha araka ny baiko azony. I Fleury sy ilay mpamily kosa samy nijanona tao aantin’ny fiarany avy.
“Vory ny vahoaka, saingy nisy ny ampahany maro no nilaza fa i Fleury no tratran’ny zandary tamin’ny halatra taolam-paty ka avy hatrany dia namoaka azy roa lahy tao anaty fiara mba ho vonoina. Namonjy azy ireo teny ireo zandary sy ireo raiamandrenin’ny tanàna saingy ilay mpamily ihany no sisa tavela teo ka novonjena haingana”, hoy ny fitantarana. Nitsoaka niaraka tamin’ny fiarany i Fleury kanjo efa nisy nanapaka mialoha ilay tetezan-kazo izay eo amin’ny lalana mivoaka ny tanàna ka tratran’izy ireo teo indray izy. Novakin’ireo olona ny fitaratra ary nokapainy tamin’ny antsilava izy io ary naratra mafy. Tafavoaka nandositra ihany anefa ity farany saingy nitsofan’izy ireo antsiva ka voasakan’ireo mponina tany amin’ny vohitra hafa manodidina tany amin’ny 2 km miala avy eo izy ka mbola nitohy ny famonoana azy ka maty izy.
Tsy tafandositraiIlay mpamily ka efa nodarohin’ireo olona ireo sy nokapainy antsy saingy tonga haingana teo ireo zandary roa lahy niaraka tamin’ireo raiamandreny maromaro izay niresaka tamin’izy ireo nanakana ny tsy hamonoana azy. Naratra mafy izy io ary nalefa tany amin’ny hopitaly. Nomena ny fianakaviany ny razan’i Fleury ka nosokafana ny fanadihadiana izay noraisin’ny zandary ao amin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Atsimo atsinanana.
“Na dia vitsy aza ireo zandary, niezaka ny nanao izay azony natao izy ireo nanavotra ny ain’ireo olona tsy manan-tsiny. Lavo noho ny fahatsorany sy ny fitiavany manampy olona i Fleury. Fisaorana lehibe kosa no atolotra ireo raiamandreny tao an-tanàna nanampy azy ireo tamin’ny fanavotana ain’olona”, hoy ny zandary.